2022 Yehowa Adansefo Ɔmantam Nhyiam
Yɛde anigye reto nsa afrɛ wo sɛ, hwɛ nhyiam a Yehowa Adansefo de nnansa bɛyɛ no bi.
COVID-19 yare no nti, yɛbɛyɛ afe yi nhyiam no wɔ Intanɛt so wɔ jw.org. Yɛde nhyiam dwumadi no begu hɔ nkakrankakra wɔ July ne August mu.
Wubetumi Ahwɛ Bi a Worentua Hwee. Wopɛ sɛ wohwɛ dwumadi no bi a, enhia sɛ wobɔ wo ho nsɛm biara hyɛ mu.
Nea Wɔbɛka Ho Asɛm Wɔ Nhyiam No Ase
Fida: Wubehu sɛnea ɔdɔ betumi ama w’asom adwo wo ne sɛnea ɛbɛma asomdwoe aba wo ne afoforo ntam. Wobɛsan ahu nea enti a yebetumi aka sɛ, akwankyerɛ a Bible de ma awarefo, awofo ne mmofra no, ɛyɛ “akwankyerɛ a ɛma asomdwoe ba abusua mu.”
Memeneda: Sɛ yɛyare, yɛn sikasɛm nkɔ yiye, atoyerɛnkyɛm ama yɛahwere yɛn agyapade, anaa yɛrehyia ɔhaw foforo bi a, yebetumi anya asomdwoe anaa? Yɛbɛhwɛ video bi a ɛbɛma yɛahu nea ebinom reyɛ wɔ wiase afanan nyinaa a ama wɔanya asomdwoe. Ɛbɛhyɛ wo nkuran paa.
Kwasida: So yebetumi ne Onyankopɔn afa adamfo ama ayɛ yiye? Wufitii ara na woabɛyɛ Onyankopɔn adamfo, anaa biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woyɛ? Ɔkasa a egyina Bible so a n’asɛmti ne “Wobɛyɛ Dɛn Ne Onyankopɔn Afa Adamfo?” no, ɛbɛma woanya saa nsɛmmisa yi ho mmuae.
Hwɛ nhyiam no program, na hwɛ ɔmantam nhyiam a yɛyɛ no ho video nso.
2022 Yehowa Adansefo Ɔmantam Nhyiam: “Monhwehwɛ Asomdwoe”!
Obiara wɔ ne haw a etumi sɛe n’asomdwoe. Bra “Monhwehwɛ Asomdwoe”! Ɔmantam Nhyiam a Yehowa Adansefo bɛyɛ no bi, na wubehu sɛnea wubenya asomdwoe ɛnnɛ ne daakye.
Drama No Apɔ So Apɔ So: Yehowa Kyerɛ Yɛn Asomdwoe Kwan
Sɛnea Yehowa ama ne bɔhyɛ ahorow reba mu nkakrankakra ne sɛnea ɔrekyerɛ ne nkurɔfo kwan ama wɔanya asomdwoe daakye no, drama yi bɛboa yɛn ama yɛahu.
Dɛn Na Ɛkɔ So Wɔ Yɛn Mantam Nhyiam Ase?
Afe biara, Yehowa Adansefo de nnansa yɛ ɔmantam nhyiam wɔ wiase baabiara. Dɛn koraa na ɛkɔ so wɔ yɛn nhyiam akɛse ase? Hwɛ video yi na wubehu.
SƐNEA YƐDE NTOBOA A WUYI NO DI DWUMA
Ɔmantam Nhyiam a Yeyii Wɔ TV So Na Yɛsan Bɔɔ Wɔ Radio So
Wɔde afe 2020 ɔmantam nhyiam dwumadi no too Intanɛt so, nanso anuanom a ɛwɔ Malawi ne Mozambique no mu pii nni akade a wɔde bɛkɔ Intanɛt so. Enti wɔyɛɛ dɛn tiee nhyiam no bi?
Share Share Yehowa Adansefo Afe Afe Ɔmantam Nhyiam
Hwɛ Afe 2022 Ɔmantam Nhyiam No Bi—“Monhwehwɛ Asomdwoe”!